I-Trickster yaseSeville, iklasikhi engaphaya koncwadi | Uncwadi lwangoku
UTirso de Molina
I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye Ngomnye wemidlalo ephawuleka kakhulu kwiSpanish Golden Age. Yapapashwa okokuqala ngo-1630 yaze yenziwa ukuba ibhalwe nguTirso de Molina. Nangona kunjalo, icandelo elibalulekileyo labagxeki kunye nababhali-mbali baroque bonisa u-Andrés de Claramonte njengombhali oyinyani.
Hlukanisa iimpikiswano malunga nokubhala, UDon Juan, ophambili walo mdlalo weqonga, ngowona mlinganiswa uphezulu kulo lonke uncwadi lwesiCastilian. Ukuthelekiswa kuphela namagama amakhulu (asuka kwezinye iindawo) zobude beRomeo noJuliet, iOedipus, iAchilles okanye iSherlock Holmes.
1.1 UTirso de Molina
1.1.1 Ukuhlaziya comedies kunye nee-autos sacramentales
1.2 Andrés de Claramonte: "omnye" umbhali
1.2.1 Iyelenqe eligcwele iithang
2 Isishwankathelo seTrickster yaseSeville kunye neNdwendwe eziMatye
2.1 Buyela kwispain
2.2 Okokuqala yima eSeville
2.3 Isifundo sokugqibela
3 Iklasikhi esingaphaya koncwadi
Njengoko kuchaziwe kumhlathi wokuqala, Akukho mvumelwano yokuvumelana xa isiza ekuchongeni umbhali I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye. Ngelixa zininzi iimpikiswano zokuphikisa uTirso de Molina njenge-mastermind. Ngokwenyani, igama lakhe lokwenyani nguFrayer Gabriel Téllez, nangona, ngokucacileyo, wayesaziwa ngegama lakhe lobugcisa.
Wayeyinkolo yaseSpain, engowasebukhosini kunye noMkhosi woMkhosi woMama wethu Wenceba kunye nokuBuyiselwa kwabaThunjiweyo. Wazalelwa eMadrid ngoMatshi 24, 1579; Umhla wokusweleka kwakhe awucacanga ncam. Kule meko, uninzi lwezifundo luhambelana ngoFebruwari 1648 njengexesha lokufa elinokwenzeka.
Ukusweleka kukaTellez ngekwenzekile eAlmazán, umasipala namhlanje oyinxalenye yoluntu oluzimeleyo lwaseCastilla y León. Into engenakuphikwa lilifa lakhe, kuba umsebenzi wakhe omangalisayo usasebenza unanamhla. Ngaphandle kwe I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye, kubhekiswa kuye UDon Gil wee-leggings eziluhlaza kunye ne-hagiographic trilogy ye ISanta Juana.
Ukuhlaziya comedies kunye nee-autos sacramentales
Isicatshulwa sikaTirso de Molina sizalisekisa umsebenzi wokuziphatha. Ngokufanelekileyo, Umbhali wahlala ethembekile kokubini kumzuzu wembali awayephila kuwo, nakubizo lwakhe lwenkolo. Ke ngoko, luphawu olungakhathalelwanga I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye.
Ngaphandle kwembambo kunye nokuhleka, ekugqibeleni akukho ndlela yokuphepha ukohlwaywa nguThixo. Nokuba umlinganiswa ophambili ngokwakhe uyazi (nangona enokuthi ekugqibeleni aguquke kwizono zakhe, akanandlela yakubaleka). Kule meko, kwenye yeengxoxo zakhe uyangqina: "akukho mhla wokugqibela ongafezekiswanga okanye ityala elingahlawulwanga."
Andrés de Claramonte: "omnye" umbhali
UAndrés de Claramonte y Monroy wayengumdlali odumileyo waseSpain kunye nomdlali odlalayo, owayephila ngexesha likaTirso de Molina. Wazalelwa eMurcia malunga ne-1560, wasweleka eMadrid ngoSeptemba 19, 1626. Kukho iimbono ezimbini ezahlukeneyo phakathi kwabo bamchaza njengomdali oyinyaniso kaDon Juan.
Kwelinye icala, Umbhali we I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye. Kwelinye icala, abanye ababhali-mbali-nangona bengaphikisani nokubhalwa kuka-Molina ngalo msebenzi-baqinisekisa ukuba wawusekwe Kude undithembe. Le yokugqibela yayiyimidlalo ehlekisayo ebhaliweyo phakathi kwe-1612 kunye ne-1615, eyabangelwa nguClaramonte.
Iyelenqe eligcwele iithang
Kwangelo xesha, abanye ababhali-mbali balatha kuLope de Vega njengomyili wokwenyani we Kude undithembe. Ke, umxholo wombhali we I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye It is a tangle ufanelwe zikwenza kubonakale ngathi bonke aba babhali. Ngenxa yoko-mhlawumbi-ngekhe kubekhona isivumelwano sokugqibela esivumelana ngazo zonke izimvo.
Isishwankathelo se I-Trickster yaseSeville kunye neNdwendwe zeTye
Ungayithenga le ncwadi apha: Inkohliso yaseSeville
Umdlalo uqala nge UDon Juan Tenorio, isidwangube saseSpain esathi, ngelixa siseNaples, sikhohlisa iDuchess Isabel. Emva kokufunyanwa kwakhe — nasemva kokurhintyelwa — ukumkani wayalela ukuba abanjwe, umthunywa wanikwa uDon Pedro Tenorio, unozakuzaku waseSpain kukumkani.
Kodwa oonozakuzaku base-Iberia abanasiphene sisebenzayo: onoxanduva lokudelela umtshakazi kaDuke Octavian ngumtshana wakhe. Emva kokucingisisa nzulu ngayo, uyayeka asitsibe. Emva kwexesha uthi akukho nto wayenokuyenza malunga nokuba namandla kwalomfana ukuba atsibe kwigumbi apho akwazi ukumkroba kwiigadi zebhotwe.
UDon Juan, ekunye nomkhonzi wakhe uCatalinón -Ubuntu osebenza "njengelizwi lesazela", nangona ingcebiso yakhe ingalandelwa- Inxalenye esiya eSeville. Kodwa ngaphambi kokungena kunxweme lwaseGuadalquivir, waphukelwa ngumkhombe kunxweme lwaseTarragona.
Kwingozi uhlangulwa nguTisbea, ongumlobi. Ngokukhawuleza ukuba achache uDon Juan, waphumelela ukulukuhla umsindisi wakhe. Ngenxa yoko, abalobi belali bayacaphuka kwaye baceba ukohlwaya le ntloni. Nangona kunjalo, uDon Juan ongafumanekiyo uyakwazi ukubaleka kwakhona, ngaphandle kokuthatha ii-mares ezimbini eziphakanyiswe lixhoba lokuzihlazisa.
Okokuqala yima eSeville
Ukufika kwakhe eSeville, uKumkani Alfonso XI wathumela ukuba abizwe. Ukumkani wayeyazi indlela yokuziphatha engalunganga yesifundo sakhe kumazwe aphesheya. Uzimisele ukoyisa intsingiselo yozakuzo eyenzekileyo. Ngesi sizathu, unyanzela umenzi wobubi ukuba atshate intombi ekhathazekileyo.
Kodwa ngaphambi kokufezekiswa kweminqweno yokwenene, uDon Juan ukhohlisa inenekazi elitsha: Doña Ana de Ulloa. Utata wakhe, akuba efumanise ulwaphulo-mthetho, ucela umngeni kulowo unoxanduva lokudyobha igama losapho lwakhe kwidolo. Emva koko, umlinganiswa ophambili kufuneka enze into entsha yokubaleka emva kokuphelisa ubomi bomceli-mngeni wakhe.
Kude kwikomkhulu laseAndalusia, ugculelo lukaDon Juan Tenorio alupheli. Emva kokubuyela eSeville, kufuneka ajongane noDon Gonzalo de Ulloa kwakhona. Umfi, ngoku oguqulwe waba ngumfanekiso oqingqiweyo, umema umbulali wakhe kwisidlo sangokuhlwa. Ngelo xesha, uDon Juan ufumana isohlwayo esifanelekileyo esivela kuThixo.
Ibinzana le-tirso de Molina.
Ekugqibeleni, undwendwe lwelitye lumrhuqela esihogweni, ngokungathandabuzekiyo nangaphandle kokumnika ixesha lokuthandazela ukuxolelwa nguThixo.. Ngale ndlela, zonke iintombi ezinyanzeliswa zizenzo zokuzingca nokunganyaniseki zomntu ophambili, ziphinda zifumane imbeko yazo.
Iklasikhi esingaphaya koncwadi
UDon Juan ngumlinganiswa oneempawu ezininzi kunye nolungelelwaniso kwimbali yonke. Ababhali abanjengoMoliere, uPushkin, uJorge Zorrilla okanye Alexandre Dumas, phakathi kwabanye abaninzi, bebephethe igalelo ekufikeleleni kwindalo iphela. UDon Giovanni, opera waseMozart ophethe i-libretto nguLorenzo da Ponte, naye uyinxalenye yeli “candelo”.
Ngaphandle koncwadi, uDon Juan (ofana no-Oedipus) une "syndrome" yakhe. Kukuziphatha okunyanzelekileyo okukhohlisayo okubangelwa ngamadoda nabafazi abangonelisekanga zizifo. Ke, "UDon Juan" yeyona icon yokwenyani yenkcubeko, Uhlaziyo lwabo luya kuqhubeka okoko uluntu luhleli luyindalo elawulayo ebusweni bomhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ithiyetha » Inkohliso yaseSeville